सलहेश फूलबारीमा मेला भर्न आज विहानैदेखि हजारौंको जनमानस ओर्लिए :प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गते माला आकारको सेतो फूल फुल्छ – Shirish News
नयाँ वर्षको आगमनसँगै राजा सलहेशको ऐतिहासिक गाथा स्मरण गर्न स्थानीय बासीहरुले लहान–१२ स्थित सलहेश फूलबारीमा मेला भर्न आज विहानैदेखि हजारौंको जनमानस ओर्लिएका छन् ।
वि.स. १३२५ ताकाका प्रतापी राजा सलहेशको शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस र प्रेमसँग गाँसिएका गाथाहरुको सम्झनास्वरुप प्रत्येक वैशाख १ गते यहाँ परम्परागत मेला लाग्ने गर्छ ।
राजा सलहेश र उहाँकी प्रेमीका मालिनीको प्रेमगाथाको रुपमा लहानदेखि चार किलोमिटर पश्चिममा रहेको करीब १० विगाहाको प्राचीन फूलबारी छ । त्यहाँको दुईवटा हारम प्रजातीको रुखमा प्रत्येक वर्षको वैशाख १ गते माला आकारको सेतो फूल फुल्छ ।
ती फूल र मेला हेर्न सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही तथा भारत विहारका हजारौं सर्वसधारण यहाँ आइपुगेका छन् । बैशाख १ गते मात्रै फूल्ने यो फूल बेलुका ओइउँदै जान्छ । फूल फल्ने स्थान र राजा सलहेश तथा उनका प्रेमी मालिनीको मन्दिर र मूर्तिहरु विशेष रुपले सजाइएको छ ।
राजा सलहेश प्रत्येक दिन सिरहा सदरमुकामस्थित आफ्नो राजधानी महिसोथा गढबाट कमल दहमा स्नान गरी फुलबारीमा आफ्ना साथीहरुसँग कुस्ती लडेपछि प्रेमीका मालिनीसँग वनविहार गर्ने किम्बदन्तीको स्मरण गर्न आजको दिनमा यहाँ लाखौं मानिसहरुको उपस्थिती रहने गर्छ ।
उक्त फूलबारीमा आएर गरेको भाकल पूरा हुने विश्वास यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको छ । राजा सलहेश तथा मालिनीको प्रेम दिवसको रुपमा मनाइने वैशाख १ गतेका दिन सोही फूलबारीमा रहेको मालिनी मन्दिर अगाडि कतिपय जोडी विवाह समेत गर्ने गर्छन् ।
मेलामा सर्कस, मौतका कुवा, झुला लगायतका आकर्षण देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाको मध्यनजर राख्दै मेलामा व्यापक मात्रामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । साथै सलहेश मेला समितिका करिब दुई सय यूवक स्वयंमसेवक समेत परिचालित छन् ।
रातिदेखि नै निसन्तान महिलाको घुइचो
फुलवारीमा रहेको सहलेस मन्दिरका पूजारी जितेन्द्र धामी हुन् । उनले वैशाख १ गतेको अघिल्लो राति राजा सलहेशको विशेष पूजापाठ गर्छन् । उनले पूजा गरेर निसन्तान महिलालाई अक्षता (चामल) दिएपछि सन्तान प्राप्त हुने विश्वास रहेको छ । सोही अनुरुप हिजो राति धामी जितेन्द्रले करिब सयौं महिलालाई अक्षता प्रदान गरे ।
निसन्तान महिलाहरु अक्षता लिन टाढा–टाढाबाट यहाँ आइपुग्छन् । करिब ७० प्रतिशत निसन्तान महिला भारतबाट सन्तान प्राप्त हुने विश्वासका साथ यहाँ आएको सलहेस फूलवारी विकास समितिका अध्यक्ष माँगैन कामतीले जानकारी दिए । अध्यक्ष कामती भन्छन्– ‘यहाँ एउटा यस्तो रुख फेला परेको छ, जसको पात निसन्तान महिलाहरुले सेवन गर्दा सन्तान पाउने गर्छिन् । यो रुख अन्य कतै भेटिएको छैन् ।’
को हुन सलहेश ? कहाँका राजा थिए ?
मिथिलाको हावापानी, खेतखलो, गाउँघर, पशु–पंक्षी, वनजंगल सर्वत्र लोकप्रिय पात्र हुन्, राजा सहलेश । राजर्षी राजा जनकपछि मिथिलामा उनलाई प्रादुर भाव भएको व्यक्तित्व मानिन्छ । पाँचौ–छैठौ शताब्दीतिर मिथिलामा आफ्नो पराक्रम र चमत्कारीक नेतृत्वले गर्दा आजसम्म उनको चर्चा छ । महिसोथा, हालको सिरहा उनको जन्मस्थल हो । उनको वास्तविक नाम भने राजा जयवर्धन सैलेश रहेको थियो ।
यिनी कुनै दन्त्य कथाका पात्र होइनन्, न त पुराणका यशस्वी राजर्षि नै हुन् । उनी त्यतिबेला राजा भएता पनि लोक कल्याणमा सक्रिय थिए जसकारण उनी जनताका प्रिय पात्र बनेको बताइन्छ । त्यसैले आज आममानिस नै यिनको अमरत्वको रक्षक बनेका छन् । उनको व्यक्तित्वमा अचम्मको आकर्षण छ ।
प्रेम, प्रकृति, शौर्य, न्याय र नेतृत्व सबै गुणमा उनी सबल मानिन्थे । सलहेसमात्र नभएर उनका सहयोगी पात्रहरू पनि देउताझैँ पूजन्छिन । पूर्वी नेपाल र उत्तरी बिहार अर्थात मिथिला क्षेत्र सलहेसको कर्मथलो रह्यो । मिथिलामा अन्याय, अत्याचार र अराजकता बढेको समयमा सलहेसको प्रादुर्भाव भएको थियो ।
सिरहाको लहानदेखि चार किलोमिटर पश्चिममा उनको नाममा राखिएको सलहेश फूलबारी छ । हरेक वर्षको नयाँ वर्षमा उक्त फूलबारीमा फूल फूल्ने गर्छ । फूलबारीमा पूजा गर्न आउने मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । यो फूलबारीमा राजा सलहेश फूल टिप्ने जान्थे भन्ने किवंदन्ती रहेको छ ।
सलहेशलाई उनकी प्रेमीका कुशमा मालिनले हरेक दिन त्यहाँ फूलको माला अर्पण गर्थिन् भन्ने किम्बदन्दी छ । त्यही प्रेमको प्रतिकका रुपमा आज पनि त्यहाँ फूल फूलेको छ । आज बेलुकासम्म यो फूल आफै ओइलाउँदै जान्छ ।